फुट्यो नेपाली कांग्रेस यी नेताहरु ले गरे घोषणा - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
फुट्यो नेपाली कांग्रेस यी नेताहरु ले गरे घोषणा
प्रकाशित मिति : शनिबार, बैशाख १५, २०७५
काठमाडौं – सिंगै पार्टी विलय गराएर नेपाली कांग्रेसमा फर्किएका विजय गच्छदारले ठूलो भाग खोजेपछि शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा हंगामा भएको छ ।
गच्छदारले विधानविपरित उपसभापति पदमा दाबी गरेपछि रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि हमला गरेका हुन्। सभापति विधानविपरित मनोमानी ढंगले चलेको भन्दै पौडेलले गच्छदारले अघि सारेको प्रस्तावमा टेकेर देउवाको कडा आलोचना गर्ने अवसर पाएका हुन्।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा विहीबार पनि गच्छदारले आफूलाई उपसभापति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। आजको बैठको सुरुवातमै बोल्दै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य गच्छदारले नेपाली कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिक एकीकरण हुँदा भएका सहमति लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पार्टी एकीकरणको समयमा गरिएको सहमति अनुसार उपसभापतिको दाबी गरेका थिए। यद्यपी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मात्रै मनोनित हुने विधानका कारण गच्छदारलाई उपसभापति बन्न अड्चन छ।
हिजोको बैठकमा अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि उपसभापतिमा दाबी गरेका थिए। गच्छदार र श्रेष्ठको दाबीले देउवा दबाबमा परेका बेला गच्छदारले श्रेष्ठलाई काउन्टर दिँदै आजको बैठकमा पुनः त्यही कुरा दोहोर्याएका हुन्।
गच्छदारले विधान विपरित दोस्रो दिनपनि उपसभापति बनाउनुपर्ने माग राखेपछि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दलमा पारदर्शिता नभएको भन्दै सभापतिको आलोचना गरे। पौडेलले निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरी विधान विपरीत नेतृत्व चलेको भन्दै सभापतिको आलोचना गरेका हुन्।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीको प्रतिवेदन भोलि पेश हुने तयारी छ। प्रतिवेदनले हालसम्म उठेका धारणाहरुको सम्बोधन गर्नेछ।
prahar news बाट
मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई जनकपुरमा ४ हजार सुरक्षाकर्मी !!
सामाजिक संजालमा राता रात हलचल मचाएका नेपालका टप ५ काण्डहरु !!
दाङमा एउटै बाख्राले पायो ६ वटा पाठापाठी
रावलले निर्मलाको हत्या गरेको स्वीकारे !
को हो त्यो नाथे निर्मला ? युटुबमा भाइरल बन्दै, आखिर यस्तो रहेछ कारण हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
बाँदर कसरी धपाउने भन्ने मिटिङमा बाँदर नै उपस्थित भएपछि…